अर्थ::Nepalese News Portal
काठमाडौं । सरकारले प्रविधिमा आधारित मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली लागू गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरेको बताएको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान...
काठमाडौँ । तपाई काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? कति छ तपाईसंग पैसा ? कति लाग्छ खर्च ? उपत्यकामा साढे २२ सय स्वायकर फिटको साढे २ तले घर बनाउने हो भने करिब ७०...
बढ्यो कर्मचारीको तलब (हेर्नुस् कसको कति)
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको छ । कर्मचारीहरुको तलब ३ वर्षपछि बढेको हो । बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै डा. अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीहरुको...
मेलम्चीले पायो ७ अर्ब ३९ करोड
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई ७ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै डा. अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो कुराको...
रेल र पानीजहाजका लागि सबैभन्दा ठूलो रकम
काठमाडौं । सरकारले रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री ड़ा. युवराज खतिवडाले रेल तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि...
काठमाडौँ । संसदले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधकाबीच मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो...
रसुवागढीको आइपिओ भर्ने म्याद थपियो, कहिलेसम्म दिने आवेदन?
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले चैत्र ६ गतेदेखि १० गतेसम्मका लागि बिक्री खुल्ला गरेको शेयर आवेदन दिने म्याद थप गरेको छ । कम्पनीले यसअघी चैत्र ६ देखि १० गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आइपीओ बिक्री खुला गरेको...
साञ्जेन र रसुवागढीमा लगानीकर्ताको आकर्षण
काठमाडौं । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरका लागि उत्साहजनक आवेदन परेको छ । आइपिओ निस्कासन भएको दोश्रो दिन आइतबार साँझसम्म साञ्जेनको ९८ प्रतिशत र रसुवागढीको ६२.६१ प्रतिशत सेयर बिक्री भएको छ...
खाता खोल्दा अब बैंकले नै १०० रुपैयाँ जम्मा गरिदिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । अभियान वैशाख १ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । चालु बर्षको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’...
कर नतिरेसम्म एनसेलको सेयर किनबेच नहुने, सर्वच्चले गर्यो यस्तो आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र असुल गराउनु पर्ने फैसला गरेको छ । बहुचर्चित एनसेल पूँजीगत लाभकर दायित्व विवादको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आजियटा र एनसेल कम्पनीबाट...